ဗေဒင် – Shwe Likes
တ န င်္ဂနွေ ဒီကာလ အတွင်း စီးပွားရေးတွင် စရန် ရည်ရွယ်ပြီးမှ အနှောက်အယှက် အတားအဆီးကြောင့် မူလအလုပ်ပဲ ဆက်လက် ကြိုးစား နေရမည်။ မိသားစု၏ အိမ်တွင်း စီးပွားရေးများ ပုံမှန်ဝင်ငွေ လျော့နည်းနေမည်။ ဂုဏ်သိက္ခာသာရှိ၍ ငွေမရှိတဲ့ကာလ ပါပဲ။ ခရီးတစ်ခု သွားရန် ပြင်ဆင်ပြီးမှ ပျက်တတ်သည်။ စက်ပစ္စည်းများ ပြင်ရန်
ေ ဖဖော်ဝါရီ လ ၂၆ ရက်နေ့ မှ မတ်လ ၃ ရက်နေ့အထိ ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံး အားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် …. (၇) ရက် သား သမီးအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ….။ ဇင်ယော်နီ Unicode ဖေဖ်ာဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မွ မတ္လ ၃
သူက လက်သူ ကြွယ်လက်ချောင်း အောက် မှာ ဒေါင်လိုက်မျဉ်းတို က လေး အ ဖြစ်တည်နေမယ် လက်သူ ကြွယ်လက်ချောင်း ပိုင် နယ် မြေက တနင်္ဂ နွေ ၊ တန င်္ဂ နွေဆိုတာက သူရဇ္ဇ လို့ ခေါ်တဲ့ နေမင်း ၊ နေမင်း ဆိုတာက
ခုနှစ်ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်း ဟောစာတမ်း ( ၂၅.၂.၂၀၂၀ မှ ၂.၃.၂၀၂၀ ထိ )
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာ အနည်းငယ် ညံ့နေတတ်ပါသည်။ အလုပ် မှာ မိတ်ဆွေအတိုက်ခံ ပြောဆိုတာတော့ ခံရတတ်ပါသည်။ အထူးသတိထားရမှာ သူတပါးမကောင်းကြံတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင် တိုးတက်မှု့တွေတော့ ကြုံတွေ့ရတတ် ပါသည် ။ ဝန်ထမ်းများဖြစ် ပါက အောက်လက်ငယ်သား မကောင်းကြံတတ်သည်။ သတိထားပါ။ အလုပ်နေရာကောင်း ရနေသော်လည်း စိတ်အနှောက်ယှက်များ နေတတ်ပါသည်။ ယခုအပတ်အတွင်း
Shwe | February 23, 2020
၇ ရက်သားသမီး အားလုံး အတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ( ၂၃.၂.၂၀၂၀) မှ (၂၉.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့ အထိ မင်းသိင်္ခ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် တနလာင်္သားသမီးများအတွက် အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် သောကြာသားသမီးများအတွက် စနေသားသမီးများအတွက် မင်းသိင်္ခ
၂၄.၂.၂၀၂၀ မှ ၁.၃.၂၀၂၀ အထိ ရာသီဖွားများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
Shwe | February 22, 2020
ဗေဒင် လက္ခဏာပညာတွေ ဆိုတာက ဘုရားရှင် လက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ အရာတွေဖြစ်ပြီးလူတွေရဲ့ ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ ကံတရားကို တွက်ချက် ခန့်မှန်းပုံဖော်ပြီး မလုပ်သင့်တာ မလုပ်ရအောင်၊ အညံ့တွေပပျောက်အောင်၊ ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်အောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးနေတဲ့ ပညာရပ်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဗေဒင်ကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ရော ဗေဒင်တွေကို ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လောက်သာ ဖတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက်ရော တစ်ပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း ကဏ္ဍကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Shwe | February 20, 2020
တနင်္ဂနွေ စီးပွားရေးတွင် ဆရာကောင်း တိုိ့၏ ကူညီမှုကို အပြည့်အဝရရှိမည်။ ခြံ၊ မြေများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကျိုးအမြတ်ရမည်။. လခစားဝန်ထမ်းလျှောက်ထားသူများ အခွင့်ကောင်းများရလာမည်။ နေရာကောင်း၊ အလုပ်ကောင်းများ ရရှိမည်။ လုပ်ငန်း နှစ်မျိုးကို ပြိုင်တူလုပ်ဖြစ်မည်။ စကားအပြောအဆိုများ မှားယွင်မည်။ စိတ်လောကြီးစွာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုမိ၊ လက်မှတ်ထိုး မိသဖြင့် ပြဿနာဖြစ်မည်။ အချစ်ရေးတွင် အချစ်ဟောင်းများ ကြွေလွင့် ပျောက်ကွယ်ချိန်
Shwe | February 18, 2020
ဗေဒင် လက္ခဏာပညာတွေ ဆိုတာက ဘုရားရှင် လက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ အရာတွေဖြစ်ပြီးလူတွေရဲ့ ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ ကံတရားကို တွက်ချက်ခန့်မှန်း ပုံဖော်ပြီး မလုပ်သင့်တာ မလုပ်ရအောင်၊ အညံ့တွေပပျောက်အောင်၊ ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်အောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးနေတဲ့ ပညာရပ်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဗေဒင်ကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ရော ဗေဒင်တွေကို ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လောက်သာ ဖတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက်ရော တစ်ပတ်စာဗေဒင်ဟော စာတမ်းကဏ္ဍကို တင်ဆက်ပေး
တနင်္ဂနွေ သားသမီး ဒီလို အချိန်​​တွေမှာ ရာထူးတိုးတာ​တွေ လုပ်​ငန်း အရှိန်​အဟုန် ​ပိုမြင့်​လာတာမျိူး​တွေကြုံရပါလိမ့်​မည်​ ​ကောင်းကံရဲ့အကျိူး​ပေးကြီးကို ပြည့်​ပြည့်​ဝဝ ခံစားရပါလိမ့်​မည်​ စက်​ပစ္စည်းအ​ဟောင်း​တွေ အဝင်မခံပါနှင့်​ အကယ်​၍ အဝင်​ခံခဲ့ပါက အိမ်​တွင်း​ရေးအဆင်​မ​ပြေမူ​တွေ ကြုံရတတ်​ပါသည်​ ကျန်းမာ​ရေးတွင်​ ဒူးအဆစ်​အမြစ်​​တွေ​ ညောင်းညာ​နေပါလိမ့်​မည်​ ငယ်​ရွယ်​သူများ အချစ်​​ရေးတွင်​​ တွေ့လျှင်​လွမ်း​နောက်​ကွယ်​​ရောက်​လျှင်​​မေ့​နေတတ်​​သော ချစ်​သူ၏ စကား​တွေ အ​ပေါ်မယုံ​သော်​လည်း